အားနာမိကြောင်း ရိုးသားစွာဝန်ခံပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အားနာမိကြောင်း ရိုးသားစွာဝန်ခံပါတယ်
Posted by Sine Sant on May 18, 2014 in My Dear Diary | 37 comments
ဒီနေ့ sunday ,
မွေးမိခင် ဖခင် ကျေးဇူးရှင် များ ချက်စ်ကျောင်းမှာ ဝတ်ပြုဆု တောင်း
နေတဲ့အချိန် သူ တို့ ရဲ့ ချစ်လှစွာသော သမီးလေးက သူတို့ လှည့်
တောင် မကြည့်တဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ သူတို့ နဲ့ ဆန့် ကျင် ဘက်
ရှိခိုးကိုးကွယ်နေ ခဲ့တယ် ။
သူ့ တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်
ပြီး ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ ပဲ နေထိုင် ခဲ့မိတယ် ။
တခါ တ လေ
ကျေးဇူးကန်းရာများ ရောက်မလား ၊ စော်ကားရာများကျမလား ဆိုပြီး
စိတ်မ ကောင်းလည်းဖြစ်မိတယ် ။ အမှန်တရားအတွက် ဘယ်သူ့ ကို
မှ မ ကြောက်ဘူးဆိုပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်နဲ့ ကျေးဇူးရှင် အဖွား
မျက် ရည်ကျနေတယ် တဲ့ ။ အသိုင်းအဝိုင် မှာ နာမည်ပျက် အောင်
လုပ်တယ် တဲ့ ဦးလေး အ ဒေါ် တွေပြောတဲ့စကား ။
အပြစ်မမြင် ပါဘူး ။ ဒါပေ မယ့် ငါ လည်းမမှားပါဘူး ။
လူဖြစ်အောင် ကျွေးမွေးပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူး တွေကို မ မေ့ပါဘူး ။:lol:
ကိုယ်ကြောင့် ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးမျက်နှာပျက် ၊ အရှက် ရ
ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်ကိုတော့ တောင်းပန် ရုံမှတပါး ဘယ်လိုမှပြန်ပြင်
ပေးလို့ မရပါဘူး ။ဒီအတွက် အားနာတယ်ဆိုတာ ရိုးသားစွာ
ကိုယ်လျှောက်မယ့်လမ်း ကို ကိုယ်ကပဲဖောက်ကြရတာပါ ။
အသိမှန်တွေ သိခဲ့ပြီးမှ တော့ ကြောက်နေလို့ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ ။
ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ မိဘ ဘိုးဘွား အားလုံးကို အားနာမိတဲ့ အ ကြောင်း
ကလွဲ လို့တခြားပြော စရာမရှိပါဘူး ။
တကယ်အားနာပါတယ် အမှန်တရားအတွက်ပါ ။
1:44 PM , 18,5,2014
ရွာထဲမှာ လဲ..ဆင်တူလေးတွေရှိ်တယ်…ကိုကျောက်..ကိုခေါင်.နောက် ကူမားရ် ပါ အပါအဝင် တော်တော်များတယ်..
အားနာလိုက်ပါ…ကျေးဇူးလည်းဆပ်ပါ..ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လမ်းကြောင်းတော့ ကိုယ်ပဲ မတိမ်းအောင်ရှောက်..
ခုထက်ထိ စိတ်ညစ်ရင် ဘုရားကျောင်း တက်နေသေးတဲ့
လုလု ဆိုစိတ်မပါပဲ ဘုရားကျောင်းတက်နေရတာကိုအရမ်း
စိတ်ညစ်တယ် အခု တော့ အိမ်နဲ့ ဝေးနေလို့စိတ်သက်သာ
ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် ဆိုလားပဲ
ဒါပေမင့် ကျေးဇူးတရား ဆိုတာကိုလဲ ပစ်ပယ်ရမယ့်အရာမဟုတ်ပြန်
သိတာဝင်ပြောသွားတယ်ဗျာ။ ကျန်တာတော့ ကျန်သူတွေဆက်ပြောပါလိမ့်မယ်
ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ကိုးကွယ်တာ မမှားပါ
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေးဇူးတရားနဲ့ ချည်နှောင်ထားဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုးစားမိပါစေနဲ့ညီမလေးရေ။
အား ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင် ပါတယ်
ကိုယ် ယုံကြည် ရာကိုပဲဆက် လျှောက်သွားမှာပါ
လျှောက်သာ လျှောက်တော့ . . .
သူတို့လည်း သူတို့အမှန်တရားနဲ့ သူတို့ ပေါ့
ပြောရရင်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်စစ် (တနည်း – ဗုဒ္ဓဟောကြား တရား ကို လိုက်နာသူ) အရီး တစ်ယောက်
Sunday တိုင်း Church မှာ ဘုရားသီချင်း ဆို၊ သူတို့တရားတွေ နားထောင် ခဲ့တာ ဆိုရင် ထူးဆန်းတယ် ထင်လား။
It’s true and real story. :-)
(ကထူးဆန်း ကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်)
အရီးခင် လည်း လုလု လိုပဲလား
ဒါဆိုရင် တော့လက်ဝါးချင်းရိုက် လို့ ရပြီ
ကမ္ဘာ့ သမိုင်း စာမျက်နှာတွေထဲမှာလည်း
ဒီလို ခွဲထွက်ပြီး လမ်းသစ်ဖောက်ခဲ့တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ် …
အခုထိလည်း ရှိနေဆဲပါပဲ ….
ဒီထဲမှာ ခင်ဗျားလည်း အပါအဝင်ပဲပေါ့ဗျာ ….
မေတ္တာတရားတွေ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ ခပ်ဖွဖွ ဒေါသတွေတော့ဖြင့် …
အော် .. အားတော့ နာစရာပေါ့ရယ် ….
ဆွေမျိုးတွေ အတွက်တော့ ဝမ်းနည်းပေးလိုက်ပါ
ကျနောလည်း ဒီအချိန်ထိ ဘယ်ဘာသာကိုမှ တိတိကျကျ
အဖေနဲ့အမေက ကိုးကွယ်ရာ မတူကြပါဘူး။ သူတို့ က အတန်းပညာလည်း သိပ်မတတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဖေ နဲ့ အမေဟာ
သူတို့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာနဲ့ဘယ်တော့ မှအငြင်းပွားတာ တစ်ခါမှ မတွေ့ ဖူးဘူး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်။ အဖေ့ ဘာသာအတွက်
အမေကကူညီသလို အမေ့ ဘာသာအတွက်ဆိုလည်း အဖေကကူညီ။
ကျနော်က နှစ်ဖက်စလုံး ဟိုမရောက်ဒီမရာက်။
နောက်တော့ကျနော့ အတွေးအမြင် တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတယ်။
ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာက အဓိကမကျတော့ ပဲ လူသားတစ်ယောက် အတွက် ကိုယ်ကျင့် တရား သီလကသာ အဓိကလို့ မြင်လာတယ်။
ကျနော်သေရင်တောင် နောက်ဘဝအတွက် နည်းနည်းလေးမှ တွေးမပူပါဘူး။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ များများစားစား မပြုနိုင်ပေမယ့် 
အကျင့် သီလကိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းတယ်။
lu lu အနေပြောင်းသည်ဖြစ်စေ မပြောင်းသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ချင်းစာ တရားအခြေခံတဲ့သီလသာ အဓိကထားပေးပါ။ ဒါတွေက ကျနော့ အတွေးအမြင်တွေပါ။
(မှတ်ချက်။ ။တချို့ ဒေသတွေမှာ ဘာသာမဲ့ တွေအတွက် သင်္ချိုင်းမြေ ခက်တယ်ဗျ)
သီလရှိယုံ နဲ့ ပြည့်စုံမှုမရှိဘူးလို့ လေ့လာခဲ့ပါတယ်
ဒါလည်း လူ့ အခွင့် အ ရေးတစ်ခုဖြစ်လို့ အတင်းလက်ခံရမယ် လို့ မဆိုလိုပါဘူး
လူ ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အတတ်နိုင် ဆုံး သီလ သမာဓိ ပညာ တော့ရှိသင့်တယ်ထင် ပါတယ်
အမှားအမှန်ကို ပညာကပဲ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင် တာပါ
ဗဟုသုတ ငယ်သေးလို့ ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရ စေ
မှားရင် နားလည်ပေးပါ လေ့လာဖို့ လိုသေးလို့ ပဲလို့ သဘောထား ပေးပါ
လတ်သ လော ဖြစ်ပေါါ် နေတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ရိုးသား
အားပေးဖတ် ရှု ပေးခဲ့တဲ့ စီနီယာ အားလုံးကို
မိရိုးဖလာဘာသာဝင်တွေထက်စာရင် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ဘာသာကို ကိုးကွယ်တာ ကောင်းပါတယ်။
မိဘတွေနဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာမတူလို့ မိဘတွေကို အားနာတာကိုလည်း နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာသာမတူပေမယ့် မိသားစုအနေနဲ့ ချစ်ခင်မှု ကြင်နာမှု မေတ္တာတွေကို ပေးနိုင်တာမို့………..
ကိုယ်ကပဲ နားလည်ပေးဖို့ ပဲ စဉ်စား ထားပါတယ်
အန်တီ့သူငယ်ချင်းအရင်းကြီး မေအေးဦးဆိုတာ ခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့မြေးပါ။
သူ့အမေကိုယ်တိုင် ခုထိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် အမည်မခံသေးပါဘူး။
အန်တီနဲ့သူ ငယ်ငယ်က ဦးနောချပ်ချမှာ ချပ်ချတက်ဓမ္မတေးတွေဆို လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာကိုမဆို သေသေချာချာလေ့လာတတ်တဲ့ မေအေးဦးဟာ ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာတွေကို အများကြီးလေ့လာအပြီး ဘ၀င်မကျတာတွေရှိလာတယ်။
အဲဒီအဖြေကို မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာကနေ စတင်တွေ့ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆက်လေ့လာခဲ့တယ်။
အခုဆို မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ အန်တီ့ထက် ပိုပြီး သာသနာပြုနေတယ်။လူတွေအများကြီးတွက် အပင်ပန်းခံပြီး ပရဟိတလုပ်၊ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းပေး လုပ်နေတယ်။
သူ့အမေလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်မခံပေမယ့် သူလှူတဲ့နေရာတွေလိုက်ပြီး ဒါနအမှုတွေ ပြုနေပြီ။
ဒါကြောင့် လုလုမိဘတွေကို အားမနာပါနဲ့။
လုလု မှန်တဲ့လမ်းပေါ်လိုက်တာ သေချာပြီဆိုရင် နောက်က မိဘဆွေမျိုးတွေပါလာမှာပါ။
လုလု နောက်က လိုက်လာကြမယ်ဆိုရင် ဖြင့် အတိုင်းထက် အလွန်
ဝမ်းသာမိမှာပါ ။ အခု တော့ ရှေးရိုးစွဲ ပုံစံခွက်ထဲမှာ မျက်စိပိတ် နားပိတ်နေခဲ့
ကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတော့ အဲ့ဒါ ကို သိပ်မ မျှော်လင့် မိပါဘူး ။
အားနာစရာမလိုဘူး ဆိုရင် တော့ အမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက် သနားစရာတော့
ကောင်းနေမယ်ထင် တယ် ။ သံသရာမှာ ခံကြရမယ့်အဖြစ်ကိုတွေးမိရင် ကိုယ့်ထက်
သနားစရာကောင်းနေလို့ စိတ်မ ကောင်းဖြစ်မိပါတယ် ။
လုလုဂို ဆားချဉ်မိကျောင်း လျှာဂျီးသပ်လျက် ဝင်ခံဗျဇေ..
လုလုကတော့ ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့လူထဲ ပါနေပြီ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖို့က ဥာဏ်ရည်လိုတယ်။ ခရစ်တော် တနေ့ကြွလာမယ်။ အဲဒီအခါ သေပြီးလူတွေ ရှင်ပြန်ထမြောက်ကြမယ် မဟုတ်လား။ ဒါဆို အဲဒီဝိဥာဉ်တွေက ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း မဖြစ်မီအတောအတွင်း ဘယ်နားမှာနေကြသလဲ။ ဟီး ပျော်လို့နောက်တာပါ။
အဖိုးအဖွားတွေပြောကြတာက တမလွန်ဘဝ ဆိုတာရှိတယ်တဲ့ ခရစ်တော်လာမ ခေါ်မချင်း အဲ့နေရာမှာပဲ အသက် ရှင် နေတုန်းကလို လုပ်ကိုင် စားသောက်ရတယ် တဲ့
အရမ်းပင် ပမ်းဆင်းရဲတဲ့ နေရာ တစ်ခုလို့ လဲပြောတယ်
လုလု ထင် တာတော့ သူတို့ ပြောတဲ့ တမလွန်ဘဝဆိုတာ
ဗုဒ္ဓ တရားနဲ့ ဆိုရင် ပြိတ္တာ ဘုံတွေလားလို့ 
ခရစ်တော့ကတော့ သေပြီးသား လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်တော့မှပြန်
ရှင် မလာနိုင် ဘူး အစ်မဂျီး ပြောသလိုပေါ့ ဥာဏ် ရှိဖို့ လိုတယ်
အခုရက်ပိုင်းအူးကြောင်ကြီး ပျောက်နေလို့ အဆားမခံရဒါ ကျာပြီ
လုလု ရဲ့ စိတ်ထားလေးက သိရလေ ချစ်စရာကောင်းလေပဲ။
အမက ဆတ်ဆတ်ထိမခံတွေကို ကြည့်မရတတ်ဘူးးး
KZ’s ထမင်းဆိုင် မှာလာအားပေးမယ်
(ဘာမှတော့မဆိုင် ပါ အဟဲ)
ဖြစ်​တည်​မှု ပဓာန ဝါဒ မှာ​တော့ လူဟာ ကိုယ့်​​ရွေးချယ်​မှုအတိုင်း ရဲရဲ ရင့်​ရင့်​ ​လျှောက်​ဖို့ပဲ ။ ကိုယ့်​​ရွေးချယ်​မှု ​ဟာ အမြဲတမ်းမှန်​​နေတယ်​လို့ ယုံကြည်​​နေဖို့ပဲလိုပါတယ်​ ။
ဟုတ်ကဲ့ အမြဲတမ်းမှန်နေတယ်လို့ ယုံကြည်မှု ကပဲ
သူ တို့ရင် ထဲ လစ် ဟာ သွား မှု့  အ တွက်
သူ တို့ကို အ ရင် က ထက် ပို တဲ့
ချစ် ခြင်း မေ တ္တာ နဲ့ သည်း ခံ နား လည် ပေး ပြီး
အ စား ထိုး ပေး ဘို့လို မယ် နော်
ဟုတ်ပါတယ် အစ်မနှင်းပြုံး ရေ
စိတ်ဆိုးဒေါသထွက် နေကြတာက အမှန်ကိုမသိသေးတဲ့အတွက်
ဆိုတာကိုပဲ နားလည်ခွင့်လွတ် ပေးလိုက်ပါတယ်
ဘာညာအရေးတော့ …ဘယ်ကစမ်းစမ်း ညာကစမ်းစမ်း ..ပြောင်သကွဲ့…
ပြောင် စရာရှိတာပြောင် ပါ
ယုံကြည်ရာ လုပ်ရဲတဲ့သတ္တိကို ချီးကျူးလေးစားပါဂျောင်း……
မိဘဆိုတာတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်သ၍ ပြုစုထောက်ပံ့ယုံပေါ့လေ…စာနာနားလည်မိပါတယ်…
ပြန်လည် ခင် မင် ရင်းနှီးစွာဖြင့် 
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို…သူအမေက မွတ်စလင် အဖေက တရုတ် မဟာယာန နောက် သူအမေက ဗုဒ္ဒဘာသာစစ်စစ် ဖြစ်တယ်။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းလည်း ဗုဒ္ဒဘာသာဖြစ်တယ်။ နောက်သိပ်မကြာဘူး။ ဒင်းက ခရစ်ယာန် ခလေးမနဲ့ ကြိုက်တော့ အဲဒီဘာသာဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီကလေးမကြောင့်ပြောင်းလိုက်တာမှန် ပေမယ့် ။အဲဒီကလေးမနဲ့ လမ်းခွဲတော့လည်း သူအဲဒီဘာသာပဲ..။ (ဒါကသူယုံကြည်မှုလေ) သူအစ်မကျတော့ ပထမတည်းက ခရစ်ယာန် မွတ်စလင်နဲ့ရတော့ မွတ်ဖြစ်သွားတယ်။ သူ့ညီမလေးနဲ့ သူအမေပဲ ဗုဒ္ဒဘာသာဖြစ်နေတော့တယ်။
တစ်အိမ်ထဲမှာကို ဘာသာအစုံ ကိုးကွယ်နေကြတယ်နော်
ယုံကြည်ရာကို ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပြီး အစွန်းမရောက်ဖူးဆိုရင် အားလုံးအိုကေမှာပါ။ တခါတလေ ဘာသာကူးပြောင်းသွားပြီးမှ အဲ့ဘာသာသာလျှင်အကောင်းဆုံး ကျန်တဲ့သူတွေ သူ့လောက်မှအသုံးမကျ ဆိုတဲ့သူတွေမြင်တော့လဲ အမြင်ကပ်သား။ ဘယ်အရာမဆို ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့လျှောက်ပါလေ။ ကိုယ့်ကျန်ရှိခဲ့တဲ့ဘာသာကိုလဲ မထိပါးဘူးဆိုရင် နောက်တော့ မိဘဆွေမျိုးတွေလဲ လက်ခံကြည်ဖြူလာနိုင် ပါတယ်။
နှင်းဆီရနံ့ ကို နှစ်သက်တဲ့ လိပ်ပြာက နှင်းဆီပင်ယံမှာ နားခိုလို့ ….
ကံ့ကော် ရနံ့ နှစ်သက်တဲ့ လိပ်ပြာက ကံ့ကော်ပန်းမှာ နားချင်လိမ့်မယ်..
ဒါက လွပ်လပ်စွာ နားခို စီးမျောခြင်းဘဲလေ….
အားပေးပါတယ်.. ကိူယ်ယုံကြည်ရာ ရပ်တည်ရဲလို့ ပါ….
လုလု ..တစ်ယောက် အနှစ်သာရစစ်စစ်ကို ရှာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ..။
အားပေးစးးကားတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ကိုကျော်စွာခေါင် နဲ့TNA ကိုလည်း
အရမ်းကျေးးဇူးတင် ပါတယ် ။ဒီလို ရွာသူားတွေရဲ့ အားပေးစကားသံတွေက
လုလုကိုရှေ့ဆက် လျှောက်ဖို့ သတ္တိတွေကိုအများကြီးဖြစ်ပေါ်ပေါတယ်